June 2019 – သတင်းစုံ
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကျူးလွန်တဲ့ ကိုကို၊ညီညီကို ဘာကြောင့်မဖမ်းနိုင်သေးတာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ မိတ္ထီလာတို့တွင် နာမည်ခွဲများစွာဖြင့် ကျောင်းခွဲများစွာရှိသည့်အနက် နေပြည်တော် wisdom hill မူကြိုကျောင်း၌ လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော်(မေလ) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်လူအလွန်နည်းပါးသော်လည်း CID မှကိုင်တွယ်စုံစမ်းသည့်တိုင် ယခုအချိန်ထိ တရားခံအစစ်ကို ဆွဲထုတ်မပြနိုင်သေးသော သက်ငယ်မုဒိန်းမှုမှ သံသယဖြစ်ဖွယ် မုဒိမ်းတရားခံနှစ်ယောက်ဟု ပြည်သူအများ ထင်ကြေးပေးနေကြသော လူငယ်နှစ်ယောက်နှင့် တရားခံကို ကာကွယ်ထွက်ဆိုပေးနေသည်ဟု နာမည်ကြီးနေပါသော ဆရာမ N (ခ) ဆရာမနှင်းနု(ကိုးတန်းမအောင် အတန်းပိုင်ဆရာမ) အဆိုပါသံသယတရာူခံ ကလေးနှစ်ဦး၏ ဖခင်မှာ မြန်မာပြည်အစိုးရဌာနများအနက် လာဘ်စားရာတွင်ဧတဒဂ်ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလှသော Read more
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အသက်ကို ကယ်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ရောင်းချခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဝမ်းသာစရာအဖြစ်အပျက်
မိသားစုအတွက်သာဆို အရာရာကိုစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေ အပုံအပင်မှာ။ တရုတ်မှ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေး Caoဟာ ကင်ဆာရောဂါသည်အမေကို ကုသဖို့အတွက် ငွေကြေးအလုံအလောက်မရှိတာကြောင့် သူမကိုယ်သူမ အင်တာနက်မှာ ရောင်းဈေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်၄၅နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Caoရဲ့အမေဟာ အရေပြားကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရတာပါ။ နောက်ဆုံး နည်းလမ်းရှာမရတော့တဲ့ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် Caoဟာ သူအရမ်းချစ်ရတဲ့မိခင်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Caoဟာ သူမကိုယ်သူမရောင်းမယ်ဆိုပြီး Wechatမှာ ကြေညာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့သူခိုင်းသမျှလုပ်ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ကတိပေးထားတဲ့ Caoဟာ လယ်သမားမိသားစုကဖြစ်ပြီး Operation လုပ်ရမယ့် မိခင်ရဲ့ ဆေးကုသမှုစရိတ်ကို မတတ်နိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Caoရဲ့ ကြေညာဟာ နေ့ချင်းညချင်း Read more
နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသည်ဟုဆိုကာ တိုင်တန်းထားသည့်အမှုတွင် ဖမ်းဆီးထားသည့် တရားခံဟုယူဆရသူကို တရားစွဲတင်ရန် အထောက်အထားမရှိသည့်အတွက် ပြန်လွှတ်ထားကြောင်း ရဲမှူးကြီးမင်းဟန်ကပြောသည်။ ဇွန်လ ၂၈ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ Hilton Hotel တွင်ပြုလုပ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ ရှင်းလင်းခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာစဉ် မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို အထက်ပါအတိုင်းပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ ရဲမှူးကြီးမင်းဟန်က “တရားစွဲတင်ဖို့က အထောက်အထားမရှိသေးလို့ တရားခံကိုပြန်လွတ်ထားတဲ့ သဘောပါ။ Read more
အိမ်တိုင်ရာရောက် မီတာလာဖတ်စဉ် ဓါတ်အားသုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် မျက်မြင်ဖတ်ရှု၍ မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေးစေလို
လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ အိမ်တိုင်ရာရောက် မီတာလာဖတ်စဉ် ဓါတ်အားသုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် မျက်မြင်ဖတ်ရှု၍ မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေးစေလိုဟု YESC ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လစဉ် လဆန်း (၁)ရက်မှ (၅)ရက်အတွင်း လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများက အိမ်တိုင်ရာရောက်မီတာလာဖတ်မည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ် အားသုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင် ဝန်ထမ်းများနှင့်မျက်မြင်ဖတ်ရှုမှတ်တမ်းတင်၍ မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေး စေ လိုကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(YESC)မှ ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့တွင် အသိပေး ထုတ်ပြန် ထားသည်။ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နေအိမ်သုံးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး (စက်မှုလုပ်ငန်းများသုံး) ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများကို လာမည့် ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ စ တင်ပြီး တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ Read more
ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ကားများ ၀င်ရောက်ရာ လမ်းကြောင်းများ
ကရင်​ပြည်​နယ်​ ၊မြဝတီဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် without ကားတွေသွင်းတဲ့မြို့ without ကားတွေ ထည်လဲစီးတဲ့မြို့လို့ အသိများကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားကို ဖြန့်ချီပေးနေတဲ့ without ကား ဝယ်ရောင်းသမားတွေသိကြတာက ဒီ without ကားတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ လေလံဆွဲပြီး မဲဆောက်သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းပါးဂိတ်မှာ (များသောအားဖြင့် ပါကစ္စတန်ကုလားတွေ)ရောင်းချကြတယ်ပေါ့လေ။ အဲ့ဒါကို မြန်မာတွေက သွားဝယ်။ဂိတ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကို ကမ်းကူးခ ဂိတ်ကြေးပေးပြီး ညနေပိုင်းမှာ ဝယ်ထားတဲ့ ကားတွေကိုလှေနဲ့တင် ဒီဘက်မြဝတီကမ်းဘက်ရောက်။ နောက် မြဝတီမြို့ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ဝယ်မယ့်သူတွေရှိရာမြို့ကို အမျိုးမျိုးသောနည်းတွေနဲ့အရောက်ပို့တဲ့ without Read more
“ထီး​ဆောင်းအခမဲ့မျက်စိဆေးရုံ” ​ကျေးဇူးေ​ကြာင့်​ တစ်​သက်​လုံး မမြင်​ရ​တော့ဘူးလို့ထင်​ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတစ်​စုံပြန်မြင်ရပြီ
တစ်​သက်​လုံး မမြင်​ရ​တော့ဘူးလို့ထင်​ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတစ်​စုံ ထီး​ဆောင်း​ကျေးဇူးေ​ကြာင့်​ ပြန်​မြင်​ရပြီသမီးရယ်​လို့ သူငယ်​ချင်းအ​ဖေ​ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်…ကြားဖူးတာကြာခဲ့​ပေမယ့် ​မရောက်​ဖူးသလို ဘယ်​နားရှိမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ခုတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ… စစ်​ကိုင်းက​နေ မုံရွာ သွားရင် မြင်းမူ မရောက်ခင် ၃ မိုင် အလို မှာ “ထီးဆောင်း”ဆိုတဲ့ ရွာ​လေး ရှိပါတယ်။အခမဲ့ မျက်စိကုသပေးတဲ့ ဆေးရုံရှိတဲ့ ရွာ​လေးပါ။ပထမဆုံး ဆေးရုံကို တည်ထောင်တဲ့ ဆရာတော် က … “တိပိဋကကောဝိဒ တိပိဋကဓရ ဘဒ္ဒ န္တ ဝံသပါလာ လင်္ကာရ” ပါ။ (၈) ပါးမြောက် တိပ်ိဋက ဘွဲ့ရထားတဲ့ ဆရာတော်တစ်​ပါးပါ။ Read more
မှိုဟင်းတစ်ခွက်အတွက် အသက်တွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
ဈေးများတွင် မှိုများလှိုင်လှိုင်ထနေသည်။ မှိုကြိုက်တတ်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်ပါ။ ၁။ မှိုများရရှိသောအခါ အရိုးကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လျှင် ကြေမွသားလျှင် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုများသည် ကြေမွသွားခြင်းမရှိပါ။ ၂။ မှိုပေါ်သို့ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးကြည့်လိုက်ပါ မည်းသွားလျှင် မစားရပါ။စားကောင်းသောမှိုသည် ဆားထိရုံနှင့် မည်းသွားလေ့မရှိပါ။ ၃။ မှိုကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လို့ သွေးရောင်ပြောင်းသွားလျှင် မစားကောင်းပါ။စားကောင်းသောမှိုမှာ အရောင်မပြောင်းပါ။ ၅။ မှိုကိုဓားဖြင့်ဖြတ်သောအခါ ပြာနှမ်းသွားလျှင် မစားရပါ။ စားကောင်းသောမှိုမှာ မပြာနှမ်းပါ။ ၆။ မှိုကို ဆားရည်တွင်စိမ်ကြည့်သောအခါ နက်လာလျှင် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုမှာ မနက်ပါ။ ၇။ Read more
”အဖေဆိုသည်မှာ ” ဟိုး. . ကျွန်တော်ငယ်ငယ် ကလေးဘဝစကားပြောတတ်စ အရွယ်တုန်းကပေါ့ အဖေနဲ့ အမေကမေးတယ် ဖေဖေနဲ့မေမေ ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်သလဲတဲ့ ကျွန်တော် ဖြေတယ် ”မေမေ့ကို ပိုချစ်တယ်” အမေကပြုံးပြီးအဖေ့ကိုကြည့်တယ် အဖေကတော့ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေလေရဲ့.အဲဒီလူထူးဆန်းကြီးအကြောင်း ကျွန်တော့်ခေါင်းသေးသေးလေးနဲ့ စဉ်းစားလို့မရခဲ့ဘူး. ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်အဝေးရောက်ခဲ့တယ် အပြုံးတုတွေကြား ကျွန်တော်ယဉ်ပါးလာတော့. .အဖေ့အပြုံးကို ပြန်မြင်လာတယ်.အဖေရယ်. အမေ့ကိုပိုချစ်တယ်ပြောတော့ အဖေတကယ်ပျော်လို့ပြုံးခဲ့တာလား. ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဆို့နင့်နေတယ် ဟုတ်တယ်. အဖေဆိုတာ. ခံစားချက်ကိုမျိုသိပ် ကျွန်တော်တို့အိပ်မက်တွေ အရောင်လက်ဖို့ တိတ်တိတ်ကလေး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့သူ. ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က Read more
“၁၂နှစ်သမီးကတည်းက ချစ်သူဖြစ်ခဲ့သူနဲ့ ၆နှစ်အကြာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ လက်ထပ်တော့မယ့် ကနေဒါဖွားမော်ဒယ်လေး Miki Akama”
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတုန်းက အသက် ၂၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပေါ့ပ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Zhang Muyi ဟာ အသက် ၁၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကနေဒါဖွားမော်ဒယ်လေးဖြစ်တဲ့ Miki Akama နဲ့ သူရဲ့အချစ်ရေးကို လူသိရှင်ကြားကြေငြာလိုက်ချိန်မှာတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အုန်းအုန်းကြွတ်ကြွတ်ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘ၀ကတည်းက ထူးဆန်းတဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာဆိုရင်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အံ့အားသင့်စရာအနည်းငယ်ကျန်ရှိလို့နေပါသေးတယ်။ Akama Miki ရဲ့သီချင်းနည်းပြအနေနဲ့ အဆိ်ုပါ ပေါ့ပ်စတားကို ငှားယမ်းထားတာ သူမရဲ့အသက် (၈) နှစ်ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ဆရာအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ချစ်ခြင်းတွေကို သီချင်းတွေထဲမှာ ထည့်သွင်သီဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဆရာဟာလည်း သူမရဲ့အချစ်ကို လက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကို Read more
Cele News, Knowledge
ရန်ကုန်ကို ခေါင်းခဲမှုတွေပေးနေပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်နေဆဲ လေလွင့်ခွေးပြဿနာ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ခွေးကိုက်ခံရလို့ လာရောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူ ဦးရေဟာ ၂ဝ၁၇ တစ်နှစ်လုံးမှာ ၇,၅ဝ၃ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ဒီနှစ် အောက်တိုဘာအထိ ခွေးကိုက်ခံရလို့ လာတဲ့လူနာဟာ ၈,၆၂၄ ဦးထိရှိနေပါပြီလို့ မြန်မာတိုင်မ်းရဲ့ စစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ မတ်လမှာ ၁,ဝ၇၉ ဦး၊ စက်တင်ဘာမှာ ၁,၁၅၂ ဦးနဲ့ အောက်တိုဘာမှာ ၁,၃၉၄ ဦးရှိခဲ့တယ်။ ဒီလတွေအနက် အောက်တိုဘာလဟာ သုံးနှစ်အတွင်း တစ်လတည်းခွေးကိုက်ခံရမှု အများဆုံး စံချိန်တင်တဲ့လ ဖြစ်ခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာမှာလည်း ခွေးကိုက်ခံရလို့ ကာကွယ်ဆေးလာထိုးတဲ့ Read more